विपिनको आँखामा गाजल, ओठमा लाली ! - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः मंसिर ३, २०७६ - साप्ताहिक
विपिनको आँखामा गाजल, ओठमा लाली !
विशाल सापकोटाको डेब्यू निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘सेल्फी किङ’ को प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै निर्माण टिमले फस्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ । आगामी माघ २४ गते प्रदर्शन मिति तय गरिएको चलचित्रको पोस्टरमा चलचित्रका मुख्य पात्र विपिन कार्कीलाई निकै भिन्न रुपमा प्रस्तुत गराइएको छ ।
विपिनको लुक्स पहिलेको तुलनामा अरु वढि आकर्षक गराउनका लागी उनको आँखामा गाजल र ओठमा रातो रंगको लिपिस्टिक लगाइएको छ । कपाल निकै लामो देखाइएको छ । विपिनको यो लुक्सबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यो चलचित्र पुर्ण कमेडी जनरामा निर्माण भएको छ ।
यो चलचित्रमा विपिनले हाँस्यकलाकारको भूमिका निर्वाह गरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । बुझिएअनुसार यो चलचित्रले एक चर्चित टेलिभिजन हाँस्यकलाकारको सफलता र व्यक्तिगत जीवनको कथा बोल्नेछ ।
‘सेल्फी किङ’मा विपिनका अलवा लक्ष्मी बर्देवा, भुवन चन्द, अभय बराल, लोकमणी सापकोटा, सविन बास्तोला, जीवन भट्टराईलगायतका कलाकारको अभिनय देख्न सकिनेछ । अभिनेत्री केकी अधिकारीले एक गीतमा कम्मर मर्काएकी छिन् ।
अघिल्लो बर्षको हिट चलचित्र ‘प्रसाद’का निर्देशक दिनेश राउतले यो चलचित्रमा निर्माता सुवास थापासँग मिलेर ‘सेल्फी किङ’ निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा विशालकै लेखन, सुशन प्रजापतिको छायांकन, जीवन थापाको सम्पादन, सुवास भुषालको संगीत र निर्मल लामाको कोरियोग्राफी छ । चलचित्रका सह–निर्माता राजेश बिसुराल र प्रवल कोइराला हुन् । हरेक चलचित्रमा फरक–फरक लुक्स दिएका विपिनको यो लुक्सलाई दर्शकले कति रुचाउने हुन् त्यो भने चलचित्र प्रदर्शन भएपछि पक्कै थाहा हुनेछ ।
विपिनको रवाफ र दु:ख सेल्फी किङ्गको टिजरमा
विराज र विपिनको भिडन्त पक्का, कसले पछार्ला ?
कसैको लायक छु
हेर यी आँखामा
‘माछा माछा’लाई सकारात्मक प्रतिक्रिया मंसिर १९, २०७६
रोमाञ्चक क्लाइमेक्स औसत प्रस्तुति मंसिर १९, २०७६
विहेका लागि सौगातलाई बढ्यो परिवारको दवाब मंसिर १८, २०७६
आँचल शर्माको फरक लुक्स मंसिर १८, २०७६
एउटै स्टेजमा शिव, राजेश र भुवन मंसिर १७, २०७६
कस्तो रहेछ २५ लाखको गीत ? मंसिर १२, २०७६
भाग्यमानी निर्माता मंसिर १२, २०७६
पोखरामा रिल्याक्स हुन्छ : केकी अधिकारी मंसिर ११, २०७६
चार्टर एकाउन्टेन्ट टंक अब फिल्मको हिरो मंसिर ११, २०७६
बेनिशाको फिटनेस मन्त्र मंसिर १०, २०७६